Samsung ayaa dalalka qaar ka iibin doonta Galaxy Note 7 oo dib loo hagaajiyay | Wararka IPhone
Samsung ayaa waddamada qaar ka iibin doonta Galaxy Note 7 oo la dayac tiray
Saabuunta opera ee Samsung Galaxy Note 7 waxay umuuqataa mid sii socota. Markii Samsung ay si rasmi ah u shaacisay dhibaatooyinka sababay qaraxyada tiro badan oo terminal ah, Waxay u muuqatay in warku uu dhammaaday terminalkaas oo aynaan mar dambe ka hadli doonin. Laakiin waxay umuuqataa in masraxa opera uu leeyahay hal cutub oo keliya, tan iyo markii ay u muuqato in warkii ay wakaaladda wararka ee Reuters daabacday bishii la soo dhaafay, ee ay ku sheegtay in Samsung ay maanka ku hayso inay soo saarto qaybaha hadhay, ugu dambeyn la xaqiijiyay. ee tijaabooyinka Galaxy Note 7 suuqa, oo ah qalab dib loo habeeyay.
Sida laga soo xigtay warbaahinta Kuuriya HankYung, shirkaddu waxay bilaabi doontaa iibinta Galaxy Note 7 oo dib loo hagaajiyay, marka batteriga lagu badalo mid nabdoon oo aan sababi doonin qaraxyo noocuu doono ha ahaadee. Dhowr bilood oo cilmi baaris ah kadib, Samsung waxay ogaatay waxa ay ahaayeen dhibaatooyinka labada dufcadood ee Galaxy Note 7 ee ay furatay, sidaa darteed qalabkani waa inuu ahaado mid 100% aamin ah. Qalabkani ma gaari doono Mareykanka ama Yurub, sababo la xiriira xannibaadda ay xukumayaashu ku soo rogeen terminalkan. Halkee haddii la heli karo ay noqon doonaan Hindiya iyo Fiyetnaam.
Sida ku xusan qoraalkan, Samsung waxay haysataa wax kabadan 2,5 milyan oo unug oo ah Galaxy Note 7, ka dib markii la istcimaalay ilaa 20.000 si loo qaado tijaabooyinka kala duwan si loo ogaado waxa ku kalifay qaraxyada ka dhacay terminaalkan. Qalabka dib loo habeeyay wuxuu yeelan doonaa dabool gadaal ka duwan kan asalka ah oo leh batteri u dhaxayn kara 3.000 mAh iyo 3.200 mAh. Sababta daboolka dambe waa macquul, tan iyo markii lagu beddelay batariga, shirkadda Kuuriya ma aysan dooneynin inay kordhiso maalgashiga terminaalkan iyadoo ku dhejineysa khadka wax soo saarka ee loogu tala galay bedelida kaliya batteriga.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Samsung ayaa waddamada qaar ka iibin doonta Galaxy Note 7 oo la dayac tiray
IPhone 8 waxaa ku jiri doona kamarad hore "kacaan" oo leh dareemayaal 3D ah
Ugaadhsadayaal lacag la'aan ah wakhti xaddidan